सर्लाहीमा आगो ताप्ने क्रममा जलेर महिलाको ज्यान गयो
चैत्र २६, २०७६ ११:२७:१२
मृत्यु हुनेमा बरहथवा नगरपालिका वडा नं. १७ कोरोरीया टोल बस्ने राम चन्द्र साहको श्रीमती बर्ष ४० की राजमती देबी साह रहेकी छन् । बुधबार अपरान्ह ४ बजे आफ्नै घरको आगनमा घुरको आगो ताप्ने क्रममा अचनाक मृतक साहले लगाएको लुगामा आगो सल्की आगो लागेपछि शरिरको पुरै भाग जली गम्भिर घाइते भएकी थिइन् ।
आगलागीबाट गम्भिर घाइते भएकी साहको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार क्रममा बुधबार राति पौने ११ बजे नै ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुर्तियाले जनाएको छ ।
त्यस्तै बुधवार राति ९ बजे नै सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका वडा नं. १ बेल्वा बस्ने राजन पासवनको श्रीमती बर्ष २५ की सरस्वती पासवान आफ्नै घर अगाडी आगो बाली ताप्ने क्रममा अचनाक लगाएको साडीमा आगो लागि हुँदा घुँडादेखि पेटसम्म जली गम्भिर घाइते भएकी छन । जलेर गम्भिर घाइते भएकी सरस्वती पासवानको अहिले जिल्ला अस्पताल मलंगवामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतित सिंह राठौरले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, पुष ८, २०७६, ११:१२:००